The Voice Of Somaliland: Xukuumadda Oo Rasaas Culus Kala Hortagtay Shacab Ka Qaybgalay Isu Soo Bax Lagu Xusayo Maalinta Aasaska SNM, Taasoo Khasaare Dhaawac Keentay
Xukuumadda Oo Rasaas Culus Kala Hortagtay Shacab Ka Qaybgalay Isu Soo Bax Lagu Xusayo Maalinta Aasaska SNM, Taasoo Khasaare Dhaawac Keentay
(Waridaad)-Waxa maanta isu soo bax balaadhan oo lagu xusayo maalintii ururka SNM la aasaasay ka dhacay barxada weyn ee xarunta xisbiga KULMIYE ee magaaladda Hargeysa. Isu soo baxxaas auaa waxaa khudbado ka jeediyey masuuliyinta kala duwan ee xisbiga KULMIYE iyo mujaahidinti xisbiga KULMIYE. Kadib markii xafladaas dhamaatay ayaa waxaa shacabkii xafladaas ka qayb galay, iyaga oo ay horgalayaan hogaanka xisbiga KULMIYE waxa ay usoo lugeeyaan dhinaca guriga guddomiyaha xisbiga Axmed Silanyo.
Hase yeeshee kahor intii aanay gaadhina guriga Muj Silanyo ayaa ciidamada ilaalada ee loo yaqaano SPU ayaa ku rasaas xoogan kala hortimi shacabkii iyo madaxdii, markii ay dhinac marayeen guriga madaxweyne kuxigeenka.
Ilaa hadda sida wararku xaqiijinayaan waxa rasaastas ku dhaawacmay mid ka mid ah shacabkii socodkaas madaniga ah ku marayay wadada dheer ee laamiga ah.
Xukuumadda Madaxweyne ayaa mamnuucday in maalinta aasaska ururka SNM oo ku beegnayd maanta oo bishu tahay lixda bisha april in lagu xuso beerta xoriyadda sidii caadadu ahayd. Taasoo sababtay in xisbiga KULMIYE isu soo bax lagu xusayo maalintas ay ku sameeyaan barxad weyn oo ku hortaala xarunta xisbiga KULMIYE ee Hargeysa.
Ciidamada ilaaladda ee SPU ayaa kadib markii ay shacabka ku fureen rasaasta waxa ay ku war geliyeen guddomiyaha xisbiga KULMIYE Muj Silanyo inuu ka baydho wadada, isla markaana ay rasaas ku furi doonan. Hase yeeshe, Guddomiye Silanyo oo ay ku hareersanayen masuuliyin badan oo ka tirsan hogaanka sare e e xisbiga KULMIYE ayaa ka diiday inuu hakiyo socodka lugta uu ku marayo laamiga. Waxx jawaab ah kama bixin ciidamadu waxa uuna guddomiyaha iyo masuuliyinti kale socod ku gaadhen gurigii guddomiyaha oo ku yaala xaafadda shacabka ee magaaladda Hargeysa.
Wali way kacsan t ahay xaaladda magaaladda Hargeysa iyada oo rasaastaas ay khalkhal gelisay shacabki magaaladda, ilaa iminkana ma cadda sababta xukuumaddu rasaas ula beegsatay dad lugaynaya oo fadqalalo iyo arrin nabadgelyada khalkhal gelin kara ku kicin.
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Monday, April 06, 2009